Archive du 20181018
Marc Ravalomanana “Ho azontsika ny fandresena…”
Mafonja ny fientanam-pon’ny vahoaka hatrany amin’ny toerana faran’izay lavitra amin’ny fanohanana an’i Marc Ravalomanana. Mahita ny zavatra iainan’ny olona izy satria efa tamin’ny propagandy 2001 no nidina tamina toerana maro tena lavitra andriana araka ny fomba fiteny, ary nitohy fony izy teo amin’ny fitondrana izy.
Pety Rakotoniaina Nidoboka eny Antanimora
Nidoboka am-ponja vonjimaika etsy Antanimora i Pety Rakotoniaina, iray tamin’ireo mpitarika ny Hetsiky ny Fanorenana Ifotony (HFI), taorian’ny nisamborana azy tany Camp Robin ny talata takariva teo raha saika hihazo an’i Fianarantsoa.
Andry Rajoelina Tena mpamita-bahoaka
Fampanantenana poak’aty, seho ivelany mipoapoaka no fanaon-dRajoelina nanomboka tamin’ny taona 2009 nanongana ny fanjakana ary io no toa tetika hoenti-mambabo indray ny fon’ny Malagasy.
Tompon’andraiki-panjakana manao fampielezan-kevitra Enga anie mba ho maro no higadra, hoy i Doudou
Herinandro mahery izay no nandeha ny fampielezan-kevitra, hoy ny filohan’ny fiarahamonim-pirenena Dinika Fanavotam-Pirenena ( DFP), Maharavo Ratolojanahary na Doudou.
Opération Mandio Nandaitra sy nampihena ny halatra omby, hoy ny Mada omby
Ela no tsy heno nitaraina intsony momba ny herisetra mpahazo ny tontonlon’ny fandraharahana omby ry zareo avy eo anivon’ny Mada omby, anisan’ny koperativa lehibe indrindra misehatra eo amin’io tontolo io.
Tantsaha sy mpanjono Fanorolahy any amin’ny faritra Vonona hampandany an’i Dada
Vonona hampandany an’i Dada amin’ny fifidianana amin’ny 7 novambra ho avy izao ireo tantsaha mpamboly sy mpiompy ary mpanjono Fanorolahy any amin’ny faritra.
Kitra vehivavy sokajy U 16 Hafana ny manasa-dalana eny Carion anio
Hafanafana ara-bakiteny ireo lalao manasa-dalana roa amin’ny
Nahatanteraka ny fivoriana « Convention annuelle » fanao isan-taona tetsy amin’ny fokontanin’Anatihazo misy ny trano fivavahany « mosquée » eto Antananarivo ny Fikambanana Miziolimana
Nanjakan’ny seksiona Antananarivo Renivohitra izay nahazo medaly volamena 10 tamin’ny ankapobeny ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’Antananarivo Renivohitra,
Mila manova filalao !
“Ndrao diso fahavalo isika ?”, hoy ny kandida ho filoham-pirenena iray izay.
Lozam-pifamoivoizana teny amin’ny By Pass Maty tsy tra-drano ilay mpitondra Scooter
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina indray teny amin'ny By Pass omaly alarobia 17 oktobra tokony ho tamin'ny 9 ora alina. Teo amin'ny 500 m miala ny Domaine eo amin'ny toerana antsoina hoe Ankazobe Alasora.
Salon de l’étudiant an’ny Madajeune Toamasina no hisantarany ny fitetezam-paritra
Sambany no handeha hitety faritra ny Salon de l’étudiant karakarain’ny Madajeune.
Aretina pesta 15 ireo olona voamarina fa tratrany
Raha ny tarehimarika voaray avy amin`ny minisiteran`ny fahasalaman-bahoaka, miisa 15 no voamarina fa misy trangana pesta amin`ireo olona natao fitiliana.
Banky Iraisam-pirenena Hitarafana ny fandrosoan’ny firenena ny teknolojia ampiasainy
Omaly alarobia 17 oktobra no andro iraisam-pirenena natokana ho fanafoanana ny fahantrana. Nanamarika izany ny teto Madagasikara ary nisy ny atrikasa maneran-tany nokarakarain’ny Banky Iraisam-pirenena niraisana tamin’ny firenena
Nanolotra lelavola mitentina 100 tapitrisa ariary ho an’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra na ny Barea, ny fitondram-panjakana omaly teny Ambohitsorohitra.
Mitohivakana ny fankaherezana sy ny fanehoan-kafalian’ireo malagasy,
ONG Green Cross Tandindonin-doza ny governemanta Ntsay
Mitombo hatrany ny tsikera mahazo an`ny praiminisitra Ntsay Christian, indrindra amin`ny tsy fifehezan`ny ekipany. Namaly bontana an`ny mpanolotsaina manokana iray ao amin`ny primatiora ny filoha mpanorina ny fikambanana Green Cross, Andrianaivoson M.
Fampiofanana amin’ny fanorenana trano eto Madagasikara Tsy mamaly ny hetahetan’ny orinasa
Tsy mifanaraka amin’ny zavatra takian’ny eny anivon’ny orinasa intsony ny fampiofanana momba ny fanorenana trano misy eny amin’ny toeram-pianarana. Izany no antony nanaovana ny tetikasa FORMAPRO-BTP ho fanatsarana ny asa manodidina ny fananganana trano araka ny tatitry ny talen’ny LTPGCM
Sampandraharahan’ny fananantany Tsy handefitra amin’ny resaka kolikoly intsony
Anisan’ny ivontoerana iray voafaritra ho be kolikoly indrindra ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny fananantany na ny “domaine”.
Kaominina Ampitatafika Vonona amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra
Vonona amin’ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny kaominina Ampitatafika. Efa nisy ny fanadiovana ny tata-drano rehetra eny an-toerana, hoy ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina,